Ahoana no hahazoana rohy ivelany avo lenta amin'ny alàlan'ny fikarohana fikarohana?
Ity lohahevitra ity dia natokana amin'ny lohahevitra hoe ahoana ny fanaraha-maso ny tsenan'ny mpanohana ny tsenan'ny tsenanareo sy ny fomba ahafahan'ity fikarohana ity ahafahana manangana ny toerana misy anao ao amin'ny SERP. Misy ohabolana iray manoritsoritra tanteraka ny fifaninanana amin'ny tsena nomerika - "Ataovy akaiky ny namanao ary ny fahavalonao dia manakaiky kokoa. "
Ny fampielezan-kevitra manintona rehetra, indrindra ny mpitsabo matihanina SEO dia manomboka amin'ny fikarohana lalindalina momba ny fikarohana sy ny tsenan'ny marika. Ny fikarohana momba ny backlinks mpifaninana niche dia ahafahanao manadino mivantana ny loharanon'ny tranonkalan'ny mpifaninana aminao ary hahita valisoa ho an'ireo fahafaha-miditra an-tserasera an-tserasera izay mety ho fampiasanao hamongorana anao ara-boajanahary.
Backlinks sisa no ivon'ny tranonkala fanatsarana ary ny fahazoana azy ireo dia lasa sarotra kokoa - sale vape. Ny vohikala iray dia tokony hahazo rohy maromaro ho an'ny tenany mba hananganana ny sokajy fototra sokajiny.
Nandritra ny folo taona farany, niova tanteraka ny tranoben'ny fifandraisana ary nanjary sarotra kokoa. Aza mino ireo "manam-pahaizana" izay milaza fa tranokala very ny tranokalan'ny rohy. Mbola mijanona ho ampahany manan-danja amin'ny tranonkala fanatsarana ary mbola mitondra ny lanjan'ny fampiroboroboana ny aterineto. Ny hany zavatra dia ny fametrahana ny fifantohana amin'ny fananganana rohy. Amin'izao fotoana izao, ny fahefan'ny loharanom-pejy izay manondro ny tranokalanao dia ny isa iray amin'ny fehezan-dalàna momba ny backlinks.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny fomba hitantanana ny famakafakana momba ny lalam-pifanarahana fifaninanana sy ny fomba ahafantarana hoe aiza ny loharanon'ny tranonkala ahafahanao manatsara ny sira amin'ny kalitao malalaka.
Mba hahafantarana ny fifaninanana dia azonao atao ny mikaroka fikarohana Google momba ny fanompoana atolotr'asa anao. Ampahafantaro ny vokatra TOP10 amin'ny iray amin'ny teny fikarohana be dia be ary ampidiro ao anaty tahadika. Ity lisitra ity dia maneho ny mpifaninana TOP niche anao. Azonao atao ihany koa ny mikaroka karoka Google - mifandraika amin'ny "fangatahanao". Google dia hanome anao koa lisitry ny tranokala mifandraika amin'ny niche.
Na izany aza, afaka manao fikarohana fikarohana ianao na mampiasa fampiasa amin'ny Semalt Web Analyzer fotsiny. Hanome anao lisitry ny sehatra mifaninana, hampiseho ny fialan-tsasatrao, ny fiovam-po ary ireo antontan-kevitra hafa momba ny statistika izay hanampy anao hahatakatra ny fomba hanamafisana ny mpifaninana aminao. Ankoatra izany, azonao atao ny manamarina ny fifaninanana ho an'ny pejy Internet, ary koa ny "habaka am-bava" eo amin'izy ireo sy ny fifaninanana.
Azo eritreretina ny manamarina ny tsirairay amin'ireo mpifaninana amin'ny TOP5 mba hijerena raha miezaka manokana izy ireo ao amin'ny toeram-pivarotananao ary miasa amin'ny mizana.
Amin'ny fampiasana fitaovam-pahaizana matihanina, dia afaka manangana alim-pandraketam-peo amin'ny fifanintsanana isan-kerinandro ianao, izay hitatitra amin'ny rohy ivelany rehetra azo avy amin'ny URL mifanandrify.
Mila mamaritra ny URL an'ny mpifanaraka aminao ianao mba hahitanao ireo fahafaha-mamerina amin'ny adiresy marika, domains izay mampifandray im-betsaka amin'ny sehatra iray, mizara rohy amin'ireo mpifaninana anao sy ireo rohy maty.